Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | မြန်မာနိုင်ငံ၏ရွေးကောက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝါရှင်တန်ပို့စ်သတင်း၊ အယ်ဒီတာအာဘော်ကဏ္ဍ၏ "Myanmar's 2015 vote sparked hope for democracy. This election shows only backsliding"ခေါင်းစဉ်သတင်းဆောင်းပါးအပေါ် မြန်မာသံရုံး၊ ဝါရှင်တန်မြို့က တုံ့ပြန်စာပေးပို့ခဲ့ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၃၀-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဖြန့်ဝေသည့် ဝါရှင်တန်ပို့စ်သတင်း၊ အယ်ဒီတာအာဘော်ကဏ္ဍ၌ "Myanmar's 2015 vote sparked hope for democracy. This election shows only backsliding" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သတင်းဆောင်းပါး ဖော်ပြမှုအပေါ် မြန်မာသံရုံး၊ ဝါရှင်တန်မြို့က တုံ့ပြန်ခဲ့သည့်စာအား ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်